U fiirsashada Fogaanta Bulshada ee Gaadiidka ..! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean45 ManisaU fiirsashada Fogaanta Bulshada ee Gaadiidka ..!
24 / 03 / 2020 45 Manisa, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Magaalada Manisa weyn waxay soo jiidan laheyd masaafada bulshada ee gaadiidka
Iyada oo qayb ka ah la dagaallanka cudurka dilaaga ah ee coronavirus, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saartay wareegto ku saabsan gaadiidka rakaabka ee gaadiidka dadweynaha, oo ah qiyaastii 50 boqolkiiba rakaabka qaadaya awoodda lagu sheegay ruqsadda gaariga. Isagoo xusaya in masaafada bulshada ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo gaadiid caafimaad qaba, Madaxa Waaxda Gaadiidka Dowlada Hoose ee Manisa Hüseyin Üstün wuxuu sheegay in milkiilayaasha gawaarida ay u hogaansamaan wareegtada la daabacay.
Tallaabooyinka cudurka 'Coronary virus' ayaa loo qaaday heer sare dalka oo dhan. Xaaladda guud, wareegto ayaa soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee gaadiidka dadweynaha si looga hortago faafitaanka faafa. Wareegtada, wuxuu sheegay in boqolkiiba 50 rakaabka qaada xamuulka awooda ee lagu sheegay laysanka gaariga ee gaadiidleyda dadweynaha ay tahay in la qaado iyo habka loo fadhiisto gaariga waa inuu ahaadaa mid looga hortago rakaabku inay midba midka kale la xiriiro. Isagoo cadeeyay in milkiilayaasha gawaarida inay u hogaansan yihiin wareegtada la daabacay, Madaxa Waaxda Gaadiidka Dawlada Hoose ee Manisa Hüseyin Üstün wuxuu yiri, “Waxaa wadankeena kajira halgan guud oo looga soo horjeedo coronavirus, kaasoo saameyn kuyeela aduunka oo dhanna halis weyn kuhanaya caafimaadka aadanaha. Macnaha guud, wareegto ayaa loo saaray gaadiidka dadweynaha si looga hortago faafitaanka faafa. Aynu taxaddarno si aan u ilaalinno masaafada bulshada ee caafimaadka wadayaasha iyo rakaabka labadaba. Dareenkan, waxaan ka codsanayaa milkiilayaasha gawaarida inay u dhaqmaan sida ku xusan wareegtada la daabacay. ”
Nidaamka Samsun Tareen 48 wuxuu socon doonaa ilaa masaafada
Qiimaha qiimuhu wuxuu ku yimaadaa masaafada Kocaeli.
Dadka leh Metrobuses Daaweynta Saldhigga Hospice, 27 xidhitaanka Bishii 11aad
Waad ku faraxsan tahay gaadiidka gaadiidka Farshaxanadu waxay ka koobantahay tareenka ilaa kanalboy iyo gaadiidka Merinos uu sahlanaado.
Istanbullular Attention! Sagaal Maalmood oo Gaadiid ah oo loogu talagalay Qadka Mareenka Jidadka